IproPrompter: Ukwenza uqhakamshelwano lwamehlo neKhamera yeWebhu yakho | Martech Zone
IproPrompter: Ukwenza uqhakamshelwano lwamehlo kunye neKhamera yeWebhu yakho
NgoLwesine, Meyi 2, 2013 NgoMgqibelo, Disemba 5, 2015 Douglas Karr
Ukwenza ujongano lwamehlo kubalulekile xa usebenzisa ikhamera yakho. UGuy Kawasaki wayesabelana ngendlela enza ngayo Ubeka ikhamera yakhe yewebhu kwitripod phambi kweliso lakhe ukuze incoko emnandi ngakumbi xa ethetha nabantu kwii hangout. UScott Atwood kaGoogle Ungene ngaphakathi kwaye wakhomba isixhobo esothusayo esincinci ukwenza izinto zibe lula.
I-Desktop Yeprojektha sisixhobo esinjenge-periscope onokuthi usibeke kwi-laptop yakho okanye kwi-desktop esweni ehambisa umbono wekhamera yakho ukusuka phezulu kwesikrini ukuya apho ujonge khona. Nokuba usebenzisa isicelo se-teleprompter okanye uthetha kwividiyo, umane ubeke iwindow ngaphakathi kwemida yesixhobo.
Ngoku unokurekhoda iividiyo okanye ubambe iiseshoni zevidiyo apho ujongana khona nabaphulaphuli bakho!
tags: Umzimbailiso kwilisoumxhasindiyibonileuyokdisoumatshini wefowuniiwebcam
Esona sicelo siShukumisayo esiPhambili! Inguqulelo 3
Ukuchithwa kweNtengiso yeNtlalo
Meyi 3, 2013 kwi-10: 57 AM
"Bona iEye2Eye ... iqondisa umbono wekhamera yakho ukusuka phezulu kwesikrini ukuya apho ujonge khona."
Ngokwenyani, ijongeka ngathi ijonga umfanekiso wevidiyo womntu onxibelelana naye ngevidiyo kwaye ibonise umbono wesipili phambi kwekhamera yakho. Ke njengoko ujonge kumfanekiso wesipili, ukujonga kwakho kujonge ngakumbi kwikhamera yakho. Ngaphandle kokuba andiziqondi izinto. 🙂
Meyi 3, 2013 kwi-11: 00 AM
Unokuba ulungile @markfrisk:disqus ! Ndijonge phambili ekufumaneni enye kwaye ndiyizame !!!
Meyi 14, 2017 kwi-3: 23 PM
Meyi 17, 2017 kwi-10: 58 PM
Ngokunyaniseka, hayi. Andikuthandi ukubhala naziphi na iincoko zam kwi-Intanethi nokuba kungepodcast okanye ngevidiyo. “Ayivakali” ngokwendalo kum.
Meyi 6, 2013 kwi-3: 38 PM
Inkampani yam yenza ividiyo yesithethi (http://www.liveonpage.com). Kwiminyaka emi-6 sisenza oku, simalunga nenkampani kuphela exelela abathengi ukuba basebenzise imiboniso enesiqingatha somzimba. Isizathu kukudibana kwamehlo okwenziwayo. Sifumanisa ukuba amazinga oguqulo, amaxesha okubukela kunye namazinga okugqabhuka zonke zibonisa ukuba ukudibana kwamehlo kwenza umahluko. Umzimba ogcweleyo ngokusisiseko yi-gimmick. Ekuphela kwexesha esibona ngalo ukudutyulwa kwentloko ukuya kwinzwane kuxa umntu engaphaya kwegumbi, kwaye ke ngoko asibahoyi.